Ọrụ | Motadata
ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị
Nyefee resume gị ugbu a
Chọta ọrụ ị ga-arụ
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na teknụzụ ịkpụ-ọnụ, ọgụgụ isi nka, na mmụta igwe na-ada ụda na-atọ ụtọ, sonyere anyị wee bụrụ akụkụ nke ihe ịtụnanya!
-abịa Soro Anyị rụọ ọrụ
Na Motadata anyị na-enye gburugburu kacha mma na ọdịbendị ọrụ maka ndị na-eto eto yana ndị ọkachamara nwere oge iji mee ka amamịghe ha wee wuo ọrụ na-eme nke ọma na ụlọ ọrụ IT.
Anyị ji ndị ọrụ anyị kpọrọ ihe na mbọ ha niile iji hụ na anyị wepụtaara ha ihe kacha mma.
Anyị na-akwado nguzozi-ndụ ọrụ na ụbọchị ọrụ ise kwa izu.
Anyị na-agbaso echiche nke amụma oghere ma na-akwado nzikọrịta ozi nke ọma.
Mepeere ndị na-anụ ọkụ n'obi, ndị na-achọ ịmata ihe, dị njikere ịmụta àgwà na-adịghị ekwu anwụ.
Na-enye ọkaibe na HR site n'ịmepụta gburugburu ọrụ dị mma yana amụma enyi na enyi ndị ọrụ.
Wardsgwọ Ọrụ & Recoghọta
A na-enweta nkwado ndị ọrụ n'ebe ụlọ ọrụ ahụ dị ma kwụọ ụgwọ ọrụ.
Chọgharịa oghere anyị dị ugbu a n'okpuru ma ọ bụ zitere anyị email ka ị gwa anyị ihe kpatara ị ga-eji dị mma na Motadata.
Department Department Marketing Nyocha ahịa ahịa Nnyocha na mmepe ahịa ahịa
Onye Mmepụta Flutter
N'ihu Onye Mmepụta - Vue JS / React JS
Opekempe 2 ruo 3 afọ ahụmahụ ọrụ na iOS / Android Minimum BE/B.Tech, CSE
Nghọta siri ike nke Flutter, Dart, Flutter UI na ihe nkiri.
Ahụmịhe egosiri na iwulite na ijikwa ngwa mkpanaka mmepụta.
Ahụmahụ na mmepe Agile, scrum.
Ọmụma na nghọta nke Firebase
Kwesịrị inwe ahụmahụ na-arụ ọrụ na teknụzụ obodo dị ka Android, iOS
Ahụmahụ na-arụ ọrụ na data dịpụrụ adịpụ site na REST na JSON
Nghọta siri ike nke ụkpụrụ imewe karịa na MVP, MVVM, na MVC
Ahụmahụ ngwaọrụ UI/UX
Ọmụma na profaịlụ nkesa iOS na asambodo maka ngwa ngwa
Ịmara mmepe ngwa weebụ yana usoro nkwurịta okwu dị iche iche nke ndị ahịa-nkesa.
Tinye Ugbu a
Ọrụ@motadata.com or + 91 79-4702-1717
Nzere bachelọ na sayensị kọmputa ma ọ bụ injinia nwere ahụmịhe nka afọ 1-3. Enwere ike ịnakwere ahụmịhe ngalaba dị mkpa n'ọnọdụ ogo.
Ahụmahụ nwere nhazi weebụ dabere na HTML5 na CSS3 (LESS / SASS)
Ahụmahụ nwere nhazi weebụ dabere na iji HTML5, CSS3, NPM, ọnụ, Gulp, ES6 (ECMAScript), JQuery, Bootstrap
Ahụmahụ na onye ahịa dị mkpa nke 3D nke leverage webGL, three.js ma ọ bụ teknụzụ yiri ya
Ahụmahụ na nyocha ihe na usoro imepụta ihe
Ahụmahụ na nghazi nghazi ngwanrọ (SCM) (dịka Subversion, Git wdg).
Nhazi siri ike na nhazi
Uzo di elu nke nkpali onwe onye, ​​ochicho ime ka ngbaputa di iche iche di na njikere idi oru n’ime uzo ndi mmadu ekesa
Ọmarịcha nkà nzikọrịta ozi ederede na okwu ọnụ na ike ịrụ ọrụ na gburugburu ebe otu na-emekọ ihe / ekesa
Nkà A Chọrọ
Nghọta ọrụ nke ụkpụrụ W3C Web Component
Ahụmahụ na-emepe ngwa weebụ site na ala
Ahụmahụ na Git, Jenkins, Maven, TFS ma ọ bụ sistemụ ụlọ yiri ya
Ndekọ egwu enwetara nke ịchọpụta na ịkwado teknụzụ ọhụrụ na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ njedebe dị mma na nrụpụta ngwa ngwa
Nghọta zuru ezu banyere ụdị UX na ụkpụrụ na mgbakwunye
Nghọta bụ isi ma ọ bụ ahụmịhe mbụ nke Kendo UI (Telerik) mgbakwunye
6 -14 Afọ
Ndị DevOps Architects nwere ahụmịhe Architecture dị omimi iji sonyere ngalaba DevOps anyị wee nyere aka kwalite onyinye SaaS anyị.
Onye ndoro-ndoro ochichi ga-aga nke ọma ga-etinye aka n'ichebe na mejuputa ngwọta igwe ojii nke ga-enyere Motadata aka ịnabata ma rụọ ọrụ SaaS maka ndị ahịa n'ofe ụwa.
Ọrụ na Akaụntụ:
Ndị DevOps Architects bụ ndị na-ahụ maka imepụta na mejuputa usoro igwe ojii siri ike, nke nwere ike ịgbatị, na-arụ ọrụ nke ọma na-arụ ọrụ maka Motadata na ndị ahịa anyị.
Nke a ga-agụnye ọrụ ndị a:
- Chepụta ma mejuputa ihe inyefe igwe ojii yana ngwọta mbugharị nke nwere nchekwa, scalable, resilient, nyochaa, nyocha na ọnụ ahịa kachasị.
- Bụrụ ikike imewe maka azịza igwe ojii na Motadata
- Soro ndị otu injinia na-arụkọ ọrụ iji kwado mmejuputa ntinye nke igwe ojii na ngwọta nke mbugharị
- Chepụta na ịzụlite usoro nhazi nhazi maka ndị ahịa na-abanye
- Chepụta ma mejuputa pipeline nnyefe na-aga n'ihu nke na-eje ozi maka ịnye na nyocha ule ndị ahịa yana gburugburu mmepụta.
- Mejuputa ma nọrọ na Cloud na DevOps ụlọ ọrụ kacha mma na ngwá ọrụ
Nkà na asambodo:
- Ọmụma miri emi nke netwọkụ Azure / AWS na ihe owuwu nchekwa
- Ezi ihe ọmụma nke amụma nnabata igwe ojii dị ka CIS na ISO27001 benchmarks
- Ọkachamara na kọmputa Azure / AWS, nchekwa, ịkparịta ụka n'Ịntanet, ndekọ na nlekota oru, nyocha na ọrụ nchekwa.
- Aka na ahụmịhe iji wuo sava dị ka Jenkins, Bamboo, Team City wdg (Jenkins masịrị)
- Ahụmịhe enwetara ma ọ bụ gosipụta ya na nyiwe igwe ojii na gburugburu mmepụta (MS Azure masịrị)
- Nghọta siri ike nke mwekota na-aga n'ihu na omume kacha mma na-enyefe na-aga n'ihu
- Ọkachamara edemede na nka akpaaka (Python na Groovy ahọrọ)
- Linux (RHEL/CentOS họọrọ) yana nchịkwa sistemụ Windows
- Ezi nka nzikọrịta ozi maka usoro mmepe ngwanrọ na-arụkọ ọrụ nke ọma
- Ọ dị mma na nke nwere onwe ya
- Ezi ihe ọmụma na-arụ ọrụ nke RDBMS na igwe ojii (RDS, PGSQL)
Anyị bụ ndị otu ngwaahịa na-eje ozi. Anyị kpebisiri ike ịmepụta teknụzụ na-eme ka nhazi dị mfe iji nwetaghachi ike azụmaahịa.
Anyị na-agha mgbe niile, na-emepe emepe ma na-etinye ngwaahịa dị egwu na saịtị ndị ahịa ụlọ na nke mba ọzọ. Ogige anyị bụ Ahmedabad, ebe ndị ọrụ injinia na-achọpụta ihe ndị na-adọrọ mmasị ịme ma hụ na ngwaahịa a siri ike na asọmpi iji tinye uru.
Na nchịkọta, ya na Motadata, Mindarray Systems na-enye ezigbo ngwọta dị mkpa iji jiri obi ike dozie ihe ịma aka nke arụmọrụ azụmahịa azụmahịa na-abawanye ụba na njikwa akụrụngwa IT.
Bịa ma bịakwute anyị dịka anyị chọrọ gị:
* Nye aka n'akụkụ niile nke okirikiri ndụ mmepe
* Dee koodu ahaziri nke ọma, nke a na-anwale, na-arụ ọrụ nke ọma
* Gbaa mbọ hụ na atụmatụ dabara na nkọwapụta
* Kwadebe ma mepụta mwepụta nke akụrụngwa ngwanrọ
* Kwado nkwalite na-aga n'ihu site n'inyocha ụzọ na teknụzụ ma gosipụta ihe ndị a maka nyocha ụlọ
Kedu ihe anyị na-achọ?
* Ọmụma nke Core Java, multi-threading, JMS
* Dozie anya na echiche OOPs
* Ihe ọmụma bụ isi na nkà ịkparịta ụka n'Ịntanet na-agbakwunye uru.
* BS / MS na sayensị Kọmputa, Injinịa ma ọ bụ isiokwu metụtara ya
Anyị na-enwe mmasị mgbe niile ịnụ n'aka ndị nwere nka, ndị ọkachamara na ndị na-emepụta ihe ọhụrụ.
Enwere onwe gị iziga anyị CV gị na nkọwa kọntaktị na
Ememe Na Motadata
Bịa chọpụta motadata - ikpo okwu kachasị mma iji were ọrụ gị gaa n'ọkwa ọhụrụ.